मुसिकोटनगरपालिका वडा नं.१ अध्यक्षमा चन्द संगै सदस्यमा हमाल विजयी - Hamro Najar
बाँके ःः स्थानिय तह निर्वाचनमा रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका वडा नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार ज्ञानु चन्द्र चन्द विजय हुनुभएको छ ।उहाँको प्रतिस्पर्धी नेकपा माओवादी (केन्द्र) का उम्मेदवार डम्वर थापालाई २९ मतान्तरले पराजित गर्दै मुसिकोट नगरपालिका वडा नं १ को वडा अध्यक्षमा चन्द ९ सय २ मतले बिजयी हुनुभएको जानकारी दिईएको छ
नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश हमाल सदस्य पदमा विजयी हुनुभएको छ ।
यस्तै सदस्यहरुमा पनि काँग्रेस– एमाले गठबन्धनका खुल्ला महिला सदस्य अन्जना केसी डिसी, दलित महिला सदस्य धनमाया नेपाली, वडा सदस्य चोपबहादुर खत्री निर्वाचित हुनुभएको छ । साथै नेपाली काग्रेस र नेकपा एमाले गठवन्धनमा नेकपा एमालेको तर्फवाट सदस्य पदमा चन्द्री महतारा विजयी नहुँदा नेपाली काग्रेस संग गठवन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले धोका खाएको छ ।
मुसिकोटमा नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा पनि कांग्रेसको अग्रता रहेको छ । नगर प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसी १ हजार १० मत ल्याउदा नेकपा माओवादी केन्द्रका बसन्त कुमार शर्माले ७ सय ५८ मत ल्याउनु भएको छ ।
मुसिकोटमा कांग्रेस(एमाले गठवन्धन वडा नं. १ को मतगणनासम्म बलियो देखिएको छ भने माओवादी केन्द्र र समाजबादीको गठबन्धन रहेको छ ।